Maxaa ugu wacan kororka duqeymaha Maraykanka ee Soomaaliya? - BBC News Somali
Tirada dadkii ku dhintay duqeyntii Atareb oo 50 qof kor u dhaaftay
Dowladda oo ka hadashay weerarkii Bariire
Maxay ka dhigantahay Iscasilaadda masuuliyiintii difaaca Soomaaliya?
Ururrada bulshada rayidka oo cambaareeyay weerarkii Bariire
Jeneraal Kenneth F. Mckenzie ayaa warfidiyeenada u sheegay in weerarada cirka ee kordhay ay sabab u tahay 'bartilmaameedyada oo banaanka isa soo dhigay'.
"Ma jiraan wax gaar ah oo aan ka ahayn in ay bartilmaameedyada noqonayaan kuwa la beegsan karo oo banaanka isa soo dhigay, marka aan iska hubino ayaan duqeynaa" ayuu yuru McKenzie.
Ma jirto sharaxaad rasmi ah oo laga bixiyay kororka weerarada, laakiin sida ay dhawr jeer sheegeen mas'uuliyiinta heerkooda kala duwanyahay ee Soomaaliya, weerarada ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu wiiqo awoodda Alshabaab xili ay socdaan hawlgalo ka dhan ah.